मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अब दीपाश्रीको ठाउँमा करिश्मा मानन्धर आउँदै
Homeसमाचारमुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अब दीपाश्रीको ठाउँमा करिश्मा मानन्धर आउँदै
October 4, 2020 admin समाचार 11842
चर्चित रिया’लिटी शो ‘मुन्द्रेको क’मेडी क्लब’ निषेधा’ज्ञा खुकुलाे भएसँ’गै पुन: सुरू हुने भएको छ । कलाका’र जितु नेपालले सञ्चा’लन गर्ने ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ कोरोना महामारीका कारण सरकारी लकडा’उनसँगै स्थ’गित भएको थियो।
लामो सम’यपछि सुरू हुँदा अब प्रसा’रण हुने शृ‌ंखला’लाई ‘सिजन २’ भनिएको छ। पहिलो सिज’नभन्दा फरक स्वाद दिन कमेडी क्ल’बमा केही हेरफेर गरि’एको जि’तुले बताए।
नयाँ सि’जनसँगै अध्यक्षमा निर्दे’शक दीपाश्री निरौ’लाको ठाउँमा ना’यिका क’रिश्मा मान’न्धर देखिने छिन् । सिजन २ को प’हिलो भाग २६ असो’जदेखि हरेक सो’मबार बेलुकी ८:४५ मा प्रसा’रण हुनेछ।
जितुका अनु’सार नयाँ सिजनमा करि’श्मा बाहेक खड्ग’बहादुर पुन मगर पनि देखिने छन्।
उनले भने, ‘नयाँ सिज’नमा केही नयाँ क’लाकारसँगै सेटअप पनि नयाँ देखिनेछ। पहिला टु’रिजम बोर्डको साँ’घुरो कोठामा छायां’कन हुन्थ्यो। यस पटक भ्वाइस अफ नेपालको स्टुडि’योमा छायांकन गरिरहेका छौं।
हाल’सम्म चार भागको छायां’कन गर्ने काम सकिइसकेको सिजन २ को पहिलो भागमा रेखा थापा अति’थिका रुपमा आउने छिन् । कोरोना महामा’रीको जोखिम कायम रहेकाले छायां’कनका बेला स्वास्थ्य सुर’क्षालाई ध्यानमा राखेर शर्तकता अपना’इएको समेत उनले बताए।
पहिलो सि’जनबाट बाहिरिएपछि दी’पाश्रीले फेसबुक स्टाटस मार्फत जितु नेपाल र मुन्द्रे’को कमेडी क्लब समूहलाई धन्यवाद दिएकी छिन् । उनले निकट भवि’ष्यमा टेलिभिज’नको पर्दामा जानकारीसमेत दिएकी छिन्। – सेतोपाटी बाट
थप ७ संक्रमितको मृत्यु, नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या कति पुगे त?
बल्ल मुख खोले दुर्गेशले अब पल दुर्गेश प्रक,रण के होला ? दुर्गेशले गायिकाको बारेमा सबै नालिबेली बताए (भिडियो हेर्नुहोस)
March 2, 2022 admin समाचार 1392
१७ वर्षिय नाबालिग गायि’कालाई कर,णी गरेको मु,द्धामा अभिनेता पल शा’हलाई ७ दिन हिरा,सतमा राखेर अनु,सन्धान गर्न अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँलाई अनु,मति दिएको छ । आ’इतबार जिल्ला अदा,लत तनहुँले उन’लाई हिरा,सतमा राखेर अनु,सन्धान गर्न ७
March 19, 2021 admin समाचार 5244
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाइ सेवा’प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा ब’ढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चा’लकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चा’लक सङ्घले बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको ज’नाएको छ । सङ्घले आज विज्ञ’प्ति जारी
के तपाईं चाउ चाउ खानु`हुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है, डाक्टरले दिए यस्तो सल्लाह
March 16, 2022 admin समाचार 1879
धेरैजसो बाल`बालिकालाई उनीहरुका अभि`भावकले जङ्कफुड अर्थात पत्रु खानेकुरा दिने प्रचलन पछिल्लो समय निकै फस्टाएको छ । छोरा`छोरी रोए भने या भनेको मानेनन् भने फका`उनका लागि पत्रु खाना दिने चलन अहिले गाउँदेखि शहर`सम्मको समस्या हो ।
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242118)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (230010)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229642)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228487)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (228019)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227454)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226802)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226386)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194401)